Saxafigan Taban Ee Gurraca Badan |
Ismaaciil Ibraahim Hassan — April 26, 2019
Maqaalkan waxaan ku eegi doonaa tayo la’aanta idaacadaha ka jira dalka iyo saxafiyiinta caadada u ah, ka hadalka waxyaabaha lidka ah, ee aan ku habooneyn in loo adeegsado habdhaqanka saxaafada. Sida inta badan aan ognahay Soomaaliya waxaa ka jira Tv-yo, idaacado, jaraa’idyo Iyo Website-yo sidoo kale waxaa soo korortay warbaahinada Boggag-yada iyo kuwa YouTube-yada.
Hadaba ujeedka dhigmadan ayaa ah saxafiga taban. Marka aanu leeyahay wariyaha gurraca ku suntan hadalkiisa iyo bandhigiisa. Waa mid ubadan waxyaabo dadku dhibsadaan ama weedho muujinaya qalafsanaan.
Muxuu ka hadlaa Inta badan Saxafiga Taban?
Waa mid jecel islamarkaana xiisihiisu u badanyahay. Weedhaha gafka ah ama waxaaba hordhac u ah. Ciwaano inta badan laga naxo. Tusaalle ahaan saxafiga taban waa kan gudbinta bandhigiisu tahay qaraxbaa dhacay, Meel hebel baa gubatay, siyaasi hebel baa cambaareyay siyaasi kale, hebelbaa meel aan loo baahneyn aaday, Waxyaabaha ka dhalan kara ayaa ah natiijo xumo iyo kuwa uu isleeyahay ku kici xammaasadda bulshadaada.
Intaa aan soo sheegnay waxay asal u yihiin saxafiga taban. Hadaba aan u kala saaro saxafiga taban labo midood:–
Saxafi ku raadinaya Ereyada, qalafsan inuu caan ku noqdo!!!
Saxafigan jecel caannimada ayaa waxaa ka dhaadhacsan. Aragti ah kaliya mida uu isleeyahay innuu ku caambaxo inay tahay ka hadalka waxyaabaha taban.
Midse waa mide kan kalana wuxuu yahay saxafi xanaaqsan ama kasoo hor–jeeda siyaasi uu islahaa waa mid aadan ku qanacsaneyn ayaa jago loo magacaabay, ama ku buunbuuni waxyaabuhuu ku guuldareystay. Tusaalle meelbaa qarax ka dhacay waxaana masuul ka ah siyaasigu uu islahaa Qalad ku raadi waxaana saxafigan usii fududaaneyso innuu isla halkii ka baafiyo goobtuu qaraxu ka dhacay iyo cida ku dhimatay asagoo markaasi eeda u saaraya ninka meesha xukunkeeda haya ee siyaasiga!!!
Sidoo kale waxaa dheer in suxufiga Taban uu falanqeyn iyo fidno aanan soo socon innuu faallo ka bixiyo. Asagoo markaasi ku duraya, maamulka halkaa joogay. Sida aan la soconana waxaa muddooyinkan ugu dambeeyay soo if baxayey saxafiyiin caadeystay ka hadalka lidka iyo waxyaabo aan tolmooneyn oo laga yaabo inay tahay tusaalooyinkaan soo qaadanay ee kala ahaa Saxafi Xanaaqsan Iyo Saxafi Caan raadis ah.
Bal aan fiiriye. Sharciga Saxaafadda miyuu dhigayaa in qofka saxafiga marwalba ay gudbintiisu ahaato fikradaha bulshada uu wax u sheegaayo mise innuu kaliya afkaartiisa qalafsan ummadda la wadaago?
Saxaafada waxaa lagu tilmaamaa inay tahay seef laba gal leh, taasoo loo isticmaalo si togan iyo qaab taban. Ma noqon karto in qof saxafi ah uu marwalba ahaado mid baahintiisu u badantahay wax taban Soomaaliduna waa tii ay dheheen «Si xun wax u sheeg. saaxir waa ka daranyahay» Ugu dambeynna. Saxafiga taban waxaaba dhacda in dadku badankood ka go’aan baahintiisu waayo waxaa keeni kara waxyaabuhuu kawaramo oo badi ku jira ereyo xanaf leh.
Tags: Saxafigan Taban Ee Gurraca Badan
Next post 7 Tilmaamo Lagu Xoojinkaro Xusuusta
Previous post Baarlamaan – Waa Maxay Baarlamaan?